Filannoo irra deebii Keenyaan wal qabatee nagaan bora'aa jira - Jilli biyyoota Lixaa akeekkachiise - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo irra deebii Keenyaan wal qabatee nagaan bora'aa jira - Jilli biyyoota Lixaa akeekkachiise
24 Onkololeessa 2017
Goodayyaa suuraa Mormitoonni ulaagaan filannoo bilisaa fi haqa qabeessaa hin guutamne jedhu
Dippiloomaatonni biyyoota lixaa filannoon irra deebii Keenyaa kamisa dhufu adeemsifamuun wal qabatee biyyattii keessatti nageenyi bora'aa jira jechuun akeekkachiisan.
Dubbiiwwan gara jeequmsaatti nama kakaasan fi haleellaan qondaaltota irratti gageeffamaa jiru, filannoo amanamaa gaggeessuun ulfaataa akka ta'u taasisaa jira jedhu, dippiloomaatonni 20.
Abbootiin alangaa Keenyaa obboleettiin hogganaa mormitootaa Raayilaa Odiingaa okkora uumuun akka himatamtu beeksisanii jiru.
Odiingaan filannoo Kamisaa hiriira mormii guddaan akka adda kutu dhaadataa jira.
Hogganaan IEBC ari'amuu dabalatee, osoo jijjiiramni hin adeemsifamiin, filannoon hin gaggeeffamu jedhu Odingaan.
Ega filannoo Hagayya 8 booda, Uhuuruu Keenyaataan injifataniiru jedhamee labsamee as jeequmsa tureen namootni 70 ajjeefamaniiru.
Manni murtii olaanaa biyyattii bu'aa filannoo sanaa, kan rakkooleen irratti mul'atan, mirkaneessuufis kan ulfaataa ta'e jechuun haqe.
Ergasii wanti jijjiirame hin jiru jedhu Odiingaan.
Jilli biyyoota alaa kun 'haala siyaasaa rakkisaa ta'aa dhufe' kan biyya diinagdee guddaa baha Afriikaa kanaa yaaddofneerra jedhu.
"Diiguun ijaaruu caalaa salphaa dha. Garuu balaa guddaa waan qabuuf, dhaabbachuu qaba," jedhan ambaasaaddarri Ameerikaa Boob Goodeek, jila dippiloomaatota biyyoota lixaa akka Firaans, UK fi Jarmanii bakka bu'uun ibsa kennaniin.
Goodayyaa suuraa Ruut Odiingaa qabeenya barbadeessuun himatamte
Torbee darbe qondaalli olaantuu komiishinii filannoo biyyatti gara Ameerikaatti baqattee turte.
Roosiliin Akoombee akka jettutti komiishinichi 'dhiibbaa' siyaasaa jala waan galeef filannoo amanamaa gaggeessuu hin danda'u.
Waraqaan filannoo hundi raabsamee xumuramee jira, teeknoolojiin ittiin sagaleen lakkaa'amus qophiidha, garuu ammayyuu filannichi ni adeemsifama moo hin adeemsifamu, yoo adeemsifames haqa qabeessummaa isaarratti shakkiin jira.
Moormitoonni filannicha irratti akka qooda hin fudhanne mirkaneessanii jiru.
Paartiin biyya bulchaa jiru Jubiliin garuu filannichi akka adeemsifamuu fi uummannis bahee akka sagalee kennu waamicha taasisaa jira.
Akka heerri mootummaa jedhutti filannoon kun Onkoloolessa 1 dura adeemsifamuu qaba ture.
Abbaan taayitaa abbootii alangaa Keenyaa obboleetiin Raayilaa Odiingaa, Ruut Odiingaa, wayita qondaaltonni komishinii filannoo biyyatti magaalaa deeggartoonni mormitootaa keessaatti baay'atan Kisuumuu keessaatti leenjiirra turan, giddugala filannoo hayyama malee seenuun qabeenya barbadeessiteetti jechuu himatee jira.
Goodayyaa suuraa Uhuuruu Keanyataa, mormitoonni filannoon hin jiru jedhaniyyuu duula gaggeessaa jira.
Komiishiniin filannoo biyyatti maqaan Raayilaa Odiingaa, dorgomtoota 6 filannoo Hagayya darbee irratti sagalee ida'ama dhibbeentaa 1 argatan waliin waraqaa filannoo irra akka turu beeksiseera.
Akka Komiishinichi jedhutti, Keenyaataan filanno Hagayya darbee irratti sagalee miliyoona 1.4 yookan %54 yoo argatan Odiingaan ammoo %45 argatanii turan.